Game Thrones ဖန်တီးသူများ David Benioff, DB Weiss သည် Netflix နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည် - Netflix သတင်း
Game of Thrones David Benioff နှင့် DB Weiss တို့သည် Netflix နှင့်အထူးသီးသန့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြသည်
Game Thrones David Benioff
Los Angeles, CA - စက်တင်ဘာ 18: စာရေးဆရာ / ထုတ်လုပ်သူဒေးဗစ် Benioff (L) နှင့် D.B. ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ Los Angeles ရှိ Microsoft ပြဇာတ်ရုံ၌ ၆၈ ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် Primetime Emmy ဆုပေးပွဲအခမ်းအနား၌ 'Game of Thrones' ဇာတ်လမ်းတွဲ 'Bastards of Bastards' အတွက်ပြဇာတ်ဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်ထူးချွန်သောအရေးအသားကိုလက်ခံသည်။ (Kevin Winter / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Arrowverse:5DC ကအဆိုပါ CW ရဲ့ lineup join နိုင်ကြောင်းပြသသည် Glow ရာသီ3Netflix သို့ယနေ့ညလာမည်
HBO TV series of Thrones ကိုတီထွင်ခဲ့သူ David Benioff နှင့် DB Weiss တို့သည် Netflix နှင့်ပထမ ဦး ဆုံးသီးသန့်ဆက်သွယ်မှုစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြသည်။
Netflix ကဖန်တီးသူများအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည် ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ ! David Benioff နှင့် D.B. Weiss သည် Netflix နှင့်သီးသန့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားကြောင်းအစီရင်ခံစာတစ်ခုအရသိရသည် ပြီးစီးရမည့်နောက်ဆုံးအချိန် ။
Benioff နှင့် Weiss တို့သည် streaming network နှင့်ကိုးခုပါသောသဘောတူညီချက်ကိုသဘောတူညီခဲ့ပြီး Netflix နှင့် Disney, Amazon နှင့်အခြားစတူဒီယို ၄ ခုအတွက်အကျိုးအမြတ်ရှိသောစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ထုတ်လုပ်မှု၊ စာရေးခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ရိုက်ကူးခြင်းစသည်တို့ကို Netflix အားပထမဆုံးအကြိမ်ကြည့်ရှုမည်ဟုနောက်ဆုံးရက်ကသတင်းပို့သည်။ Shonda Rhimes နှင့် Ryan Murphy တို့လက်မှတ်ထိုးထားသောသဘောတူညီမှုများနှင့်ဆင်တူသည်။
ဤသည် Netflix အတွက်ကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်။ The ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ ဟောလီးဝုဒ်တွင်အပြောင်မြောက်ဆုံးသောအနုပညာရှင်များနှင့်ထုတ်လုပ်သူများမှာအများဆုံးလိုချင်သောစာရေးဆရာများဖြစ်ကြသည်။ Netflix ကသူတို့နှင့်သဘောတူညီမှုတွင်သော့ခတ်နိုင်ခြင်းသည် streaming network ၏အနာဂတ်အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Netflix သည်အပါအ ၀ င်လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတွင်ပြသခဲ့သည့်ပြပွဲများစွာသို့ streaming အခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည် သူငယ်ချင်းများ၊ ရုံးခန်း၊ နှင့်များစွာသောအခြား။ ထိုဆုံးရှုံးမှုများကိုထေမိစေရန် streaming network သည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအကြောင်းအရာများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် Benioff နှင့် Weiss တို့ကိုတစ်စုံတစ်ရာသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာသိသည်။ ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ သိသာထင်ရှားတဲ့အားလုံးအချိန်ရဲ့အကြီးမားဆုံးပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဖတ်ပါ6 Netflix ကနောက် GoT ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြသသည်
ဒီသဘောတူညီချက် Benioff နှင့် Weiss များအတွက်လိုက်တယ်အချိန်တွင်လာပါတယ်။ အကယ်၍ ဒီသဘောတူညီချက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကကြေငြာခဲ့မယ်ဆိုရင် Netflix အတွက်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ခိုးယူမှုအကြောင်းလူတွေကပြောကြလိမ့်မယ်။
ယခုရာသီ၏နောက်ဆုံးရာသီကနေအပေါငျးတို့သဝေဖန်မှုပြီးနောက် ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ, Benioff နှင့် Weiss သူတို့ကဲ့သို့ယခုလူကြိုက်များများမှာနဲ့တူဒါဟာမခံစားရဘူး။ Netflix ကအဲ့ဒါကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး။ သူတို့ပြပွဲတွေနဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုစလုပ်တာနဲ့ပရိတ်သတ်တော်တော်များများကတော့မထင်ဘူး။
အဆိုပါစုံတွဲသည်လာမည့် Star Wars သုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းများအတွက်သတင်းများကိုလည်းရေးသားဖော်ပြထားသည်။
Netflix မှာ Benioff နဲ့ Weiss ဘာတွေထွက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကြည့်ရတာတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးနေ့ကိုသူတို့ကကြီးမားတဲ့စီးရီးမှာနောက်ထပ်အက်ကွဲလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်အစီရင်ခံနေသည်, ငါဖြစ်ကောင်း streaming များကွန်ယက်အတွက်ဒီမှာဂိမ်းအစီအစဉ်ထင်ပါတယ်။ သငျသညျအမြိုးမြိုး၏အဓိကလိုက်လျောညီထွေနှင့် / သို့မဟုတ်ကမ္ဘာကြီးကိုတည်ဆောက်ခြင်းအဘို့အသွားကြသည်မဟုတ်လျှင်သင်ဤနှစ်ခုယူဆောင်ကြဘူး။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် Narnia ၏ရာဇဝင်များ?
Netflix သည်အနာဂတ်သို့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဦး ဆောင်ရန် Matthew Aldrich ကိုအသုံးပြုထားသည်။ Benioff နှင့် Weiss တို့ကိုအိမ်ထဲ၌ထားခြင်းသည်ကမ္ဘာ့ဆောက်လုပ်ရေးအပေါ်သူတို့၏အကြံဥာဏ်များမရရှိခြင်းသည်မိုက်မဲရာကျသည်။ သူတို့ကတီဗွီတွင်ရှင်သန်ရန်နှင့်ကမ္ဘာကြီးကိုတည်ဆောက်ရန်ရည်မှန်းချက်ကြီးသောစိတ်ကူးယဉ်စာအုပ်စီးရီးများယူဆောင်လာရန်တာဝန်ရှိသည်။ မျှော်လင့်ချက်အနေဖြင့်၊ သူတို့သည်အတွေးအခေါ်အချို့နှင့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုမျှဝေနိုင်သည်။
ငါ Netflix ကဒီသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပျက်နိုင်ခဲ့သည်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်, ငါ Netflix ကစာရင်းပေးသွင်းထားသူအများစုကလည်းအဲဒီလိုခံစားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဝေဖန်မှုများမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ ထိုစုံတွဲသည်တီဗီသမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးပြသနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးထိုအတွေ့အကြုံသည်လာမည့်စီမံကိန်းများအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။
Benioff နှင့် Weiss သည် Team Netflix နှင့်ပူးပေါင်းရန်မည်သို့ထင်သလဲ။ ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များအတွက်သိပါစေ!
Stay သည် Benioff၊ Weiss နှင့် Netflix တွင်၎င်းတို့၏လာမည့်စီမံကိန်းများအကြောင်းသတင်းများကိုပိုမိုသိရှိရန်အသင့်ရှိနေပါ။
နောက်တစ်ခု:Game of Thrones ပြီးနောက်စောင့်ကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးပွဲ ၂၅ ခု
netflix အပေါ် outlander ၏ရာသီမည်မျှ
netflix အပေါ်နောက်ဆုံးနိုငျငံတျောရာသီ4လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
sabrina လက်သမား 2016 အသက်ဘယ်လောက်?